Ebe a na-emepụta ọkụ na-acha ọkụ ọkụ nke China, Egwuregwu Iju Mmiri, Egwuregwu Light Bulbs Manufacturer na Supplier
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu egwu,Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri,Ogige ọkụ bọmbụ,Egwuregwu Floodlights,,
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Ogige ọkụ bọmbụ
Ngwaahịa nke Ogige ọkụ bọmbụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Egwuregwu Egwuregwu egwu , Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ogige ọkụ bọmbụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
IP65 Igwe ọkụ Fọd 1000W 2000W maka Ọgba egwuregwu  Kpọtụrụ ugbu a
1000W Led High Mast Iju Mmiri Ighalo Retrofit Luminaire  Kpọtụrụ ugbu a
Iju Mmiri Iju Mmiri N'èzí 600W Egwuregwu Stadiums 78000LM  Kpọtụrụ ugbu a
600W Led Stadium light for Sports Billboard Garage  Kpọtụrụ ugbu a
600W N'èzí Ada Iju Mmiri Ìhè 78000lm 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
600W N'ime ime ụlọ na n'èzí na-agbagharị agbagharị ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Igwe Mmiri mmiri 400 Watt Led 52000lm  Kpọtụrụ ugbu a
IP65 Jiri oghere Arena 600W maka ire ere  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri nke Mmiri Mmiri Ìhè Mmiri nke 800W maka Ụlọ Nkata  Kpọtụrụ ugbu a
850W Ebube Mgba Ogba Ogo Ocha  Kpọtụrụ ugbu a
400W N'èzí Football Led Pole Light Fit  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Igwe ọkụ a 1000 Watt nwere ọnụ ọgụgụ dị 130,000lumens. Ìhè Light 1000w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Iju Mmiri 2000w bụ...
Nke a 1000W High Mast Led Retrofit nwere ọnụ ọgụgụ nke 130,000lumens. Ìhè Ìhè nke Ọdachi Gafere dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ....
Iju Mmiri Iju Mmiri N'èzí 600W Egwuregwu Stadiums 78000LM Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye...
600W Led Stadium light for Sports Billboard Garage Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ...
600W N'èzí Ada Iju Mmiri Ìhè 78000lm 5000K Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na...
Ọnụahịa otu: USD 405 - 425 / Piece/Pieces
Bbier Led Sport Court Light jiri ọnụọgụ abụọ SMD na-egbuke egbuke na mmetụta lumen ruru 130lm / w. Anyị na-eji Meanwell ọkwọ ụgbọala na-enye ọrụ dị elu ma bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya maka Ụlọ Egwuregwu ime ụlọ a . Umu Ohia Uhie A ỤMỤ-anụ-agwọ-M...
Mmiri Igwe Mmiri mmiri 400 Watt Led 52000lm
Ọnụahịa otu: USD 330 - 339 / Piece/Pieces
Ọkụ Mmiri Iju Mmiri anyị na-agbapụta na-anwụ anwụ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ mmiri. Enweghi ikuku infrared, ọ bụghị igwe radieshon, ọ dịghị mmetụta ọ bụla. Mmiri Mmiri 400 a nke Watt nwere nnukwu ndụ dị elu mgbe ọ ka na-arụ ọrụ ike. Iju Mmiri...
Egwurugwu Arena Anyị nwere 600w nwere mmepụta ọkụ 78,000-ọkụ iji mechie mgbidi, akara ntanetị, akwụkwọ mpịakọta, okpokoro, ubi, ụlọ nkwakọba ihe, ámá egwuregwu, nchekwa, ọkụ ọdịda anyanwụ, ọkụ mgbasa ozi. Aja Aja a maka ire bụ ezigbo mgbanwe nke ndụ...
Ike nke ime ụlọ na-agba ume 800W nwere voltage voltage AC100 ~ 277V, mgbanwe dị ukwuu maka 2500W Halogen Bulb Kwesịrị ekwesị, chekwaa 80% na ọkụ eletrik ọkụ. Egwuregwu n'èzí n'èzí n'èzí bụ ogo 120. Ọkpụkpọ ọhụụ ọhụrụ nke na-ebute nnukwu...
Ọnụahịa otu: USD 610 - 630 / Piece/Pieces
Bbier 850W Ebube Mkpụrụ maka Ogige Ubi bụ nnukwu onwunwu na elu àgwà site na iji nnukwu lumen Led ibe. E jiri ya tụnyere okpukpu ọkụ nke ọdịnala, ebe anyị dị elu nke na-agbasi elu na-ebuwanye ibu ma ikuku ikuku dị mma. Okpokoro Mast anyị dị elu bụ...
400W N'èzí Football Led Pole Light Fit
Egwuregwu Igwe Mmiri 400W nke anyị na-eji SMD3030 ibe na ọrụ dị mma bụ 130Lm / W. Anyị na-eji ọkọlọtọ Meanwell a ma ama maka ọwa a n'èzí . Ihe ngosi lumen maka Egwuregwu Nlekọta 400w bụ 52000lm na ike nchekwa dị ihe karịrị pasent 80 iji tụnyere...
China Ogige ọkụ bọmbụ Ngwa
Egwuregwu Mgbawa na -adabara maka ọkụ n'èzí, ubi, n'ámá, mbadamba nkume, ụlọ ọrụ, docks, stadiums na ebe ndị ọzọ a chọrọ ọkụ. Ogige ọkụ bọmbụ nwere mgbochi ikpuchi ọkụ, na oriọna na accessoriesmeet ihe gbasara gburugburu ebe obibi . Egwuregwu Egwuregwu egwu maka ama egwuregwu nke ike dị ukwuu, nkwụsị nke mmebi, na ngwa ngwa eletriki iji mezuo ihe ndị dị mkpa maka nkwụsị ọkụ . Ịmepụta egwuregwu egwuregwu na-aga n'ihu na-aghọ ihe ga-ekwe omume karị na Led Stadium Light Flood . Site na nchekwa ego ruo pasent 75, ị nwere ike belata oke ume ike. Site na mmụba na àgwà ọkụ na mmepụta, visibiliti ga-aka mma. Nke a na-eme ka nchekwa dị mma n'ụzọ abụọ: maka ndị egwuregwu na ndị ọbịa. Site n'inye ndị egwuregwu aka ka ha hụkwuo n'ubi ma ọ bụ n'ụlọ ikpe, ha ga-enwe ike izere ihe ọghọm na Stadium Floodlights . N'otu ụzọ ahụ, Fans na ndị ọbịa nwere ike iche na ọ dịghị mma na stadium ma ọ bụ na-adọba ụgbọala na ebe ndị dị mma.
Egwuregwu Egwuregwu egwu Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri Ogige ọkụ bọmbụ Egwuregwu Floodlights Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu